रामेछापको विकासको आधार उर्जा होः कार्की « Ramechhap News
रामेछापको विकासको आधार उर्जा होः कार्की
रामेछापमा मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरुले अन्तिम थालेका छन् । निर्वाचनको महालो रामेछापमा तातिएको छ । यसै विषयमा रामेछापको प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ का लागि कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका रत्न कार्कीसँग रामेछाप न्युजले गरेको कुराकानीः
निर्वाचनमा तपाई के एजेण्डा लिएर जनताको बीचमा भोट माग्दै हुनुहुन्छ ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता लोकतान्त्रिको संस्थागत विकास गर्नु नै हुनेछ । प्रदेशसभाको निर्वाचनमा म निर्वाचित भएको अवस्थामा जिल्लाको विकास भूमिका खेल्नेछु । प्रदेश सभाले कानुन बनाएर देशको विकासमा लाग्ने छु । सामाजिक एजेण्डा र विकास निर्माणको लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ । कानुनी राज्य महत्वपूर्ण हुन्छ । जिल्लामा धेरै समस्या छ । समस्या एकै पटक समाधान नहुने अवस्था छ । जिल्लाको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरेर विकास गर्ने एजेण्डा लिएर गएको छु ।
निर्वाचनको क्रममा धेरै आश्वासन लिएर आउने तर निर्वाचन जितेपछि केही पनि काम नगर्ने प्रचलन छ नि ?
निर्वाचनको क्रममा आकाशको तार नै झार्छु भनेर म भन्न चाहन्न । पूरा गर्न नसकिने बाचा गरेर म जनतालाई झुक्याउन चाहन्न । स्वभाविक रुपमा हाम्रो समाजमा समस्या छन् । सडक विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षमा ठूलो विभेद छ । गाउँमा पढने र शहरमा पढने विद्यार्थीमा पाठ्यक्रम, शिक्षक, भौतिक सुविधाको विभेद छ । विभदेकारी शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्न भूमिका खेल्छु । एउटै प्राणालीको शिक्षा नेपालमा आवश्यक छ । रामेछापका जनताको स्वास्थ्यमा राम्रो पहुँच छैन् । रामेछापमा अस्पताल निर्माणमा म निर्वाचित भएपछि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने छु ।
तपाईले जित्नु भएको अवस्थामा रामेछाको समृद्धिको लागि के के काम गर्नुहुन्छ त ?
रामेछाप नदी नै नदीले घेरिएको छ । रामेछापको विकासको आधार उर्जा हो । सबै नदी नाला र खोलाबाट अत्याधिक मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न चाहन्छौ । यो योजना अगाडि बढाउन सकेको अवस्थामा रामेछापको मुहार फर्ने सकिन्छ । बहुमुल्य जडिबुटी त्यसै खेर गइरहेको छ । यसको यथोचित पहिचान गरेर विकास गर्न चाहन्छौ । उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न लाग्छौं । सडकलाई व्यवस्थित गर्दै खानेपानीको समस्या समाधान गर्न लिफ्ट सिस्टम बाट भएपनि स्वच्छ खानेपानी पु¥याउछौ । परम्रागत कृषि प्रणालीले श्रम खेर गइरहेको छ । अब व्यवसायीक कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएको छु । युवाहरुको सकारात्मक सोचको साथ अगाडि बढाउन सक्ने हो रोमछापको परिवर्तन सम्भव छ । म अझै पनि लामो समय रानजीति गर्ने अठोट छ । लोभ र स्वार्थ विशेषमा भ्रम छर्न चाहन्न । जे गर्न सक्छु त्यो गर्ने हो । समाजमा रहेको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न लाग्नेछु ।